Panel-tokana miaraka am-panovana efijery miasa:
● Screw Extruder dia afaka misintona mivantana avy amin'ny mpanova efijery, mety ny manala sy manadio,
● Manangana teknolojia fanamafisam-peo mandroso amin'ny tsindry, amin'ny alàlan'ny tsindry ataon'ny polymera handroahana singa fitomboka, hahatratrarana ny vokatra famehezana tsara indrindra ary hanova haingana kokoa ny lamba.
● Ny bolt karazana penetrate dia mampifandray ilay extruder.
● Fampifangaroana maodely, mety amin'ny masinina extrusion mahazatra ary mety diovina.
● Manangana ny fitaovana fanafanana anaty, ho an'ny fiarovana angovo azo antoka. Tariby mifono tanteraka, ho an'ny fisehoana kanto.